Paul Scholes iyo Owen Hargeaves Oo Magacaabay Xiddigii Manchester United Ee Guusha Ka Hor Istaagay Kooxdiisa | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaPaul Scholes iyo Owen Hargeaves Oo Magacaabay Xiddigii Manchester United Ee Guusha Ka Hor Istaagay Kooxdiisa
Paul Scholes iyo Owen Hargeaves Oo Magacaabay Xiddigii Manchester United Ee Guusha Ka Hor Istaagay Kooxdiisa
Paul Scholes iyo Owen Hargeaves ayaa ka hadlay barbarrihii ay Manchester United la gashay AC Milan kulankii xalay ka dhacay Old Trafford.
United ayaa garoonkeeda ku qaabbishay Milan lugta hore ee wareegga 16ka Europa League, waxaana gool ay heshay bilowda qaybta dambe uu meesha ka baxay daqiiqaddii ugu dambaysay oo goolka barbarraha ay Milan dhalisay.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa ciyaarta xalay kusoo bilaabay goolhaye Dean Henderson oo saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ba ciyaarayay kaddib markii David de Gea la siiyey fasax uu ku caawiyo xaaskiisa oo umushay.
Dean Henderson oo ciyaar wanaagsan muujiyey kulankii horyaalka ee Manchester derby ee ay 2-0 ku garaaceen City ubuucan horraantiisii ayaa waxa uu xalay dhibbane u noqday eedaynta goolkii laga dhaliyey kooxdiisa.
Paul Scholes iyo Owen Hargeaves ayaa Dean Henderson ku eedeeyey inuu lahaa qaladka goolka laga dhaliyey daqiiqadihii dheeraadka ahaa ee ciyaarta lagu daray.
Halyeyga Manchester United ee Scholes ayaa yidhi: “Waxay ahayd inuu badbaadiyo, waxay ila tahay inuu iskugu dayay si ka adag sidii ay ahayd. Marka hore, waxay ahayd inuu kubadda bannaanka uga saaro shabaqa, wuu badbaadin karayay, shakina kuma jiro. Wuu ogaan doonaa.”
Scholes waxa kale oo uu tilmaamay in Henderson uu kooxdiisa ka hor joogsaday guul, sidoo kalena uu iska lumiyey fursad uu ugu dagaallami karayey inuu ku noqdo goolhayaha koowaad ee kooxda.
Laacibkii hore ee Manchester United ee Owen Hargreaves ayaa isaguna ku raacay Scholes qaladka uu sameeyey goolyahuhu, waxaanu yidhi: “Waa wiil da’yar oo kalsooni badan, waanu garan doonaa inay ahayd inuu badbaadiyo. Wuu arki doonaa, waxa jiray dad badan oo hortiisa taagnaa, laakiin haddii aynu si daacad ah u hadalno, Milan way u qalmaysay inay ciyaarta wax ka hesho.”
Hargreaves oo hadalkiis sii wata ayaa yidhi: “Goolhaye kastaa wuu sameeyaa qaladaad, ciyaartoydana ma ogaan karaysid illaa ay sameeyaan qalad.”